Olee otu ndabere ngwa na data na-enweghị a mgbọrọgwụ onye ọrụ | Gam akporosis
Esi ndabere ngwa na data na-enweghị ịbụ a mgbọrọgwụ ọrụ
Francisco Ruiz | | Gam akporo Root, Ngwa gam akporo, Nche, Nkuzi
N'ime usoro nkuzi a ga - enyere gị aka, enwere m ike igosi gị ihe ngwọta maka ndị ọrụ ahụ niile chọrọ ịrụ Ndabere ngwa na data na-enweghị ịbụ a mgbọrọgwụ ọrụ.
O doro anya na ngwa a maara gị nke ọma Helium - App Sync na Ndabere, ngwa nke amara aha ya Kol na nke ahụ na mbụ Anyị na-ama na-akwado gị na ụbọchị gị ebe a na gam akporosis, blog enyemaka gị maka gam akporo.
Nyere mmelite natara site na ngwa ngwa gam akporo, ọtụtụ ndị ọrụ na ndị na-agụ Gam akporosis ha agwawo anyị, rịọ ma chọọ, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme ihe nkuzi vidio iji kọwaa usoro otu Helium ma ọ bụ Carbon si arụ ọrụ maka gam akporo, ya atụmatụ na ọbụna nkwado ma weghachite ngwa.
Yabụ maka ha niile ebe a bụ arịrịọ bara uru video nkuzi na otu esi eji Helium maka gam akporo.
1 Esi ndabere ngwa na data na-enweghị ịbụ a mgbọrọgwụ ọrụ
2 Njirimara na isi ọrụ nke Helium na-enye anyị
3 Ngwa nbudata
Na vidiyo agbakwunyere n'elu akara ndị a, m na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma banyere Helium - App Sync na Ndabere, M na-egosi gị ọbụna usoro dị mfe iji mee ka nke mbụ gị Ndabere nke ngwa arụnyere na gị gam akporo na ịchọrọ idebe. Applicationsfọdụ ngwa na ọbụna a ga-azọpụta ya na onye ọrụ data.
Nke a si chekwaa ngwa na data onye ọrụ Ọ pụtara na, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chekwaa egwuregwu nke anyị jisiri ike rute n'ogo 10, mgbe ị na-eweghachite otu egwuregwu ahụ, ma n'otu ọdụ ahụ ma ọ bụ nke dị iche iche, a ga-azọpụta anyị na ọganihu emere. Otu ihe a ga-eme na ngwa nke anyị banyere ma ọ bụ debanye aha, nke ga-echekwa data anyị niile ka anyị wee ghara itinye aha njirimara na paswọọdụ ọzọ mgbe anyị weghachite ngwa ahụ.
Njirimara na isi ọrụ nke Helium na-enye anyị
N’ụzọ ezi uche dị na ya, dịka ị nwere ike iche, isi ihe Helium maka gam akporo na-enye anyị bụ nke cazụ ma weghachite ngwa na data backups na-enweghị mkpa ịbụ onye mgbọrọgwụ, ọ bụ ezie na n'etiti atụmatụ ya iji gosipụta, anyị nwere ike ịkọwa akụkụ ndị a:
Ndabere nke ngwa na data na-enweghị inwe mgbọrọgwụ.
Mweghachi nke akwụkwọ nkwado ndabere ejiri ngwa ahụ.
Ekwe omume nke na-eke nkwado ndabere akwụkwọ nke naanị data nke ngwa iji chebe ohere na esịtidem ebe nchekwa nke anyị gam akporo.
Kpọọ ọdọ mmiri ngwà maka nkwado ndabere.
Machiini ma hazie nkwado ndabere na mpaghara anyi.
Ohere nke encrypting ndabere mbipụta iji paswọọdụ.
Arụ ọrụ iji bulite nkwado ndabere anyị na Google Drive.
Ike itinye ọrụ nchekwa igwe ojii dị iche iche na Draịvụ iji chekwaa nkwado ndabere na Helium.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, weghachite nkwado ndabere echekwara na Google Drive ma ọ bụ site na igwe ojii ojii nke onye ọrụ ahọrọ. (Nhọrọ a chọrọ ngwa ịkwụ ụgwọ).
Enwere ike ibudata ngwa ahụ site na Playlọ Ahịa Google na usoro ya n'efu ma ọ bụ na ya Premium ma ọ bụ ụgwọ nhọrọ maka naanị 3,71 euro. Onu ogugu ga-echi onu ma oburu na anyi nwere oru di egwu nke Helium na enye anyi mee nkwado ndabere nke ngwa na data na-enweghị mkpa ịbụ ndị ọrụ mgbọrọgwụ.
Helium - App Sync na Ndabere
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Root » Esi ndabere ngwa na data na-enweghị ịbụ a mgbọrọgwụ ọrụ
Gini mere na asịrị nke mmalite mmalite nke Galaxy Note 5 enweghị isi?
Samsung na Sherpa kwuwapụta nkwekọrịta maka itinye Sherpa Ọzọ na Galaxy S6 na S6 Edge